Turing, Turing Phone ကုမ္ပဏီသည်ဒေဝါလီခံခြင်းအတွက်ဖိုင်များတင်သည် Androidsis ပါ
Turing Phone နာမည်ကိုလူအတော်များများသိပုံမပေါ်ပေမရ။ ၎င်းသည် Turing ကုမ္ပဏီမှ ၂၀၁၅ တွင်ဈေးကွက်၌ဖြန့်ချိရန်ကတိပြုထားသောဖုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခိုင်မာဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးဖုန်းအဖြစ်ကြေငြာထားသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဖုန်းကိုကြေငြာပြီးတဲ့နောက်မှာကုမ္ပဏီရဲ့နှောင့်နှေးမှုတွေစတင်ခဲ့တယ်။ ၎င်း၏စတင်လွှင့်ချိန်ကတည်းကရွှေ့ဆိုင်းထားသည်.
ဒီ Turing Phone ကိုကြေငြာခဲ့တာသုံးနှစ်ရှိပြီဒါပေမယ့်သုံးစွဲသူတော်တော်များများလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါတို့ကဒီစက်ကိုမေ့နိုင်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကိရိယာနောက်ကွယ်မှကုမ္ပဏီဖြစ်သော Turing သည်ဖင်လန်နိုင်ငံတွင်ဒေဝါလီခံခြင်းအတွက်တိုင်ကြားထားသည်။
အမှတ်တံဆိပ်၏သမိုင်းကြောင်းသည်မွေးစကတည်းကအနည်းဆုံးဟုပြောရန်အလွန်စပ်စုခဲ့သည်မရ။ အစကတည်းကသူတို့ကဖုန်းကို hack ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကြေငြာခဲ့တယ်။ ၎င်းကို၎င်းထက်စောပြီးဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Turing Phone နဲ့ပတ်သတ်ပြီးဖန်တီးသူတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုဘယ်တုန်းကမှသက်သေပြလို့မရခဲ့ပါဘူး.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမှတ်တံဆိပ်သည်ဖုန်း၏ဗီဒီယိုသဘောတရားများကိုသာပြသခဲ့သောကြောင့်ဖုန်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးပါမရ။ ဒါကြောင့်ဒီစက်ပတ်ပတ်လည်မှာမသိတဲ့သူအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ပိုမိုတိကျသောသတ်မှတ်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း၊ ဗိုလ်လုပွဲများကိုမည်သည့်အခါမျှထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေမရ။ မင်းမသိတဲ့အတိုင်းမသိအများကြီးပဲ။
ထို့ပြင်ဖင်လန်နိုင်ငံရှိမီဒီယာအသီးသီးကလည်းယင်းအချက်ကိုအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ကြသည် ကုမ္ပဏီသည်ဤနှစ်များလုံး၌ဗလာဖြစ်နေသောဂိုဒေါင်ငှားရမ်းထားသည်မရ။ ထို့ကြောင့် Turing Phone သည်မည်သည့်အခါကမှမထုတ်လုပ်ခဲ့ပုံရသည်။ ယင်းအစား၎င်းသည်တစ်ချိန်လုံးထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါတွေအားလုံးဟာကုမ္ပဏီကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်။
၂၀၁၇ တွင်ဒေါ်လာတစ်သန်းခွဲကျော်ဆုံးရှုံးမှုများကိုအစီရင်ခံပြီးကတည်းကကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်မရ။ ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Steve Chao ကသူတို့ဟာစီးပွားရေးကိုလုံး ၀ မစွန့်ခွာခဲ့သလိုဖုန်းကိုဈေးကွက်တင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Turing ဖုန်းကုမ္ပဏီ၏ဒေဝါလီခံခြင်းအတွက်ဖိုင်များ